नोबेल पुरस्कार कसले गरे अस्वीकार? किन गरे अस्वीकार?? – मझेरी डट कम
नोबेल पुरस्कार अस्वीकार गर्ने अर्का व्यक्तिमा नोवेल पुरस्कार अस्विकार गर्ने अर्का व्यक्तिमा भियतमानका लि डूक थो हुनुहुन्छ । सन् १९७२ को नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त रुपमा अमेरिकाका हेनरी किसिन्जर र भियतनामका लि डूक थोलाई प्रदान गरिएको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा भियतनाममा अमेरिका-भियतनाम युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १९५४मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र हुँदा उत्तरी भाग साम्यवादी प्रभाव र दक्षिणी भाग प्रजातन्त्रवादी प्रभावमा रहे । ती दुई बीचको संर्घषमा अमेरिकाले दक्षिण भियतनामलाई सहयोग मात्र गरेन, सेना पठाएर आक्रमण समेत गर्‍यो । अमेरिका-भियतनाम युद्ध ‘प्रजातान्त्रिक विश्व’ र ‘साम्यवादी विश्व’ बीचको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । सन् १९५९ नोभेम्बर १मा शुरु भएको भियतनाम युद्ध सन् १९७५ अप्रिल ३०मा दक्षिण भियतनामको राजधानीमाथि कम्युनिष्टहरूको कब्जा भएपछि अन्त्य भएको थियो । नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिँदा युद्ध जारी थियो । लिले भियतनाममा शान्ति स्थापना भई नसकेको र अमेरिका तथा दक्षिण भियतनामी सरकारले पेरिस शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै पुरस्कार अस्वीकार गर्नुभयो । विश्लेषकहरूका अनुसार, भियतनाम युद्धका लागि जिम्मेवार व्यक्तिसँगै पुरस्कार प्रदान गरिनु नै उहाँले पुरस्कार अस्वीकार गर्नुको मूल कारण थियो ।
युवामन्च मासिक २०७० मंसीरमा प्रकाशित